Madrid ayaa waxa ay garaacday Sociedad 2-1 - Tilmaan Media
Real Madrid ayaa waxa ay dhaaftay kooxda ay xafiiltanka ka dhexeeyo ee Barcelona kaddib markii ay 2-1 uga badisay Real Sociedad Axadii. Sergio Ramos iyo Karim Benzema ayaa dhaliyay goolasha guusha qeybtii labaad ee ciyaarta.
Ramos ayaa u xaqiijiyay rigoore ay heleen Madrid daqiiqaddii 50-aad ee cayaarta halka Benzema uu ku daray goolkii hoggaanka daqiiqadii 70-aad. Cayaartani waxa ay Madrid siisay fursad ay kaga hor marto kooxda ka dhisan gobolka Catalan ee Barca, taasoo jimcihii Sevilla la gashay barbaro 0-0. Madrid iyo Barcelona ayaa isku 65 dhibcood haysta hase ahaatee Madrid waxa ay ku hoggaaminaysaa dhanka goolasha.
“Waxaa weli harsan ciyaaro badan, sidaas darteed waxaa weli sii jiraya cadaadiska saaran kooxda” Sidaas waxaa yiri tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane. Waxa uu intaasi ku sii daray “Waa guul wanaagsan laakiin ma beddeli doonto dadaalka kooxda iyo fekerkeenna. Wax walba ayaa la go’aamin kari doonaa dhamaadka horyaalka.
Qarax kadhacay Muqdisho